Ụlọ Nche, Ọktoba 2013​—Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị?
ỤLỌ NCHE ỌKTOBA 2013
Baịbụl kọọrọ anyị otú anyị si malite ịdị ndụ na otú Chineke ga-esi esi n’aka Mesaya zọpụta ụmụ mmadụ.
Baịbụl sịrị na ya bụ akwụkwọ si n’aka Chineke nke kwuru gbasara Chineke? Olee ihe i nwere ike ịmụta na Baịbụl?
Olee Otú Anyị Si Malite Ịdị Ndụ n’Ụwa?
Baịbụl akọghị ogologo akụkọ banyere otú eluigwe na ụwa si malite. Ọ kọọrọ anyị na Jenesis, bụ́ akwụkwọ mbụ dị na Baịbụl, otú eluigwe na ụwa si malite ịdị. Olee ihe ọzọ anyị nwere ike ịmụta na Jenesis?
Chineke Kwuru Otú Ọ Ga-esi Azọpụta Ụmụ Mmadụ
Olee otú nkwa Chineke kwere Ebreham si gbasa Mesaya ahụ? Mụta otú Chineke ga-esi eme ka ụmụ mmadụ kwụsị ịrịa ọrịa, ịta ahụhụ, na ịnwụ anwụ.
Ọtụtụ ndị kweere na Jizọs bụ Mesaya ahụ e kwere ná nkwa. Ndị ọzọ ekweghị. Leba anya n’ihe Baịbụl kwuru.
Olee otú ozi Chineke chọrọ ka mmadụ niile nụ, bụ́ nke dị na Baịbụl, nwere ike isi baara gị uru taa nakwa n’ọdịnihu?
Ọtụtụ ndị gbara di ha ma ọ bụ nwunye ha alụkwaghịm na-achọpụtakarị na ihe na-akara ha njọ karịa otú ha tụrụ anya ya. Ndụmọdụ Baịbụl nyere nwere ike inyere gị aka idi nsogbu dị n’ịgba alụkwaghịm.
Chineke na-eji obi ya niile agbaghara ndị mmehie chegharịrịnụ. Oleezi otú anyị kwesịrị isi na-emeso ndị ọzọ ihe. Gịnị mere o ji dị oké mkpa ka anyị na-agbaghara ndị ọzọ?
Mụta otú ịmụ Baịbụl si mee ka otu nwoke na-eme ihe ike ghọọ onye na-eme udo.
Otú ihe na-acha nwere ike ime ka ihe ahụ ruo mmadụ n’obi. Lebagodị anya n’atọ n’ime ha ma hụ otú ha nwere ike isi ruo gị n’obi.
ỌKTOBA 2013 Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị?
mailto:?body=ỌKTOBA 2013 Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw13%26issue%3D20131001%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=ỌKTOBA 2013 Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị?